Coronavirus oo dhibaato badan gaadhsiiyey bulshada Soomaaliyeed ee UK – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Coronavirus oo dhibaato badan gaadhsiiyey bulshada Soomaaliyeed ee UK
London, Boqortooyada Ingiriiska – Hanna Ali, tabaruc oo la shaqeysa dhowr ururo oo bulshada ah, ayaa si aan caadi aheyn ugu mashquulsaneyd tan iyo markii cudurku ka bilowdey Boqortooyada Midowday.
Waqti badan ayey ku bixisaa wadaagida macluumaadka af soomaaliga iyadoo rajeynaysa in qoys walba uu helo farriimaha nafaha lagu badbaadinayo.
“Hada waxaa jira ku dhowaad sheegitaanno maalinle ah oo ku saabsan nolosha dadka Soomaalida ah ee lumiyay ama isbitaal loo dhigay COVID-19,” ayay u sheegtay Al Jazeera.
Dabayaaqadii bishii la soo dhaafay, cabsiteedii ugu weyneyd ayaa la rumeeysan yahay markii uu fayrasku ku dhacay aabaheed, C / raxmaan Cali Arkow, oo ahaa nin caafimaad qab ah oo 60-sano jir ah oo aan qabin xanuun hoose ama kale.
Cali, maamulaha farshaxanka ee Arts iyo Dhaqanka Kayd ee London, wuxuu yiri “Uma fileynin inay sidan oo kale ka dhaceyso gurigeyga,” ayuu yiri Cali.
“Waxa ku bilaabmay sidii qufac fudud oo qallalan ayaa loo rogay halkii 20 maalmood oo cisbitaalka lagu jiray uu laha neef qabad oo hawo la siineyey .”
Aabaheed wuxuu dhintay Abriil 15, waxaana la aasay 10 maalmood ka dib. Iyada oo Boqortooyada Midowday ay sii wadayso hirgelinta talaabooyin murugsan oo bulsheed, ayay awoodi weyday inay la sii joogto aabbaheed maalmihii ugu dambeeyay, aaskiisuna wuxuu ahaa arrin cajiib ah ‘.
“Tani waxay argagax weyn ku noqotay qoyska oo dhan,” ayay tidhi. “Awood la’aanta in la yiraahdo nabad gelyada labada isbitaal iyo inta lagu guda jiro aaskayaashiina kama aysan noqon wax riyo ah.”
Fayrasku waxa uu galaaftey nolosha dadka Soomaalida ah ee ku nool Britain da ‘kasta iyo da’ walba – laga soo bilaabo 13-sano jir Ismaaciil Maxamed Abdulwahab iyo Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen, oo ah 83-jir, muusikiistaha caanka ah Axmed Ismaaciil Xuseen Hudeidi, 91
Tirada dhimashada rasmiga ah ee isbitaalada Boqortooyada Ingiriiska ee cudurka loo yaqaan ‘coronavirus’ ayaa taagan inka badan 20,000, laakiin tirada dhabta ah ayaa la rumeysan yahay inay aad uga badan tahay.
Mohamed Abdulkadir Biriq, 59, calanyahan hore oo caan ah oo ku noolaa UK ilaa 1992, wuxuu kamid yahay dhibanayaashii COVID-19. Wuxuu qabtay sonkorow waxaana la dhigay isbitaal ka dib markii uu ku dhacay fayraska.
Walaalkiis, Ibraahim Maxamed Biriq ayaa yidhi “Waxay ahayd wax xun oo xanuun badan laakiin waxay ahayd qorshaha Ilaahay waana inaan aqbalnay”.
Dadku waxay ku yeeri jireen “halyeey” waxayna ku amaaneen mustaqbalkiisa kubada cagta 1970-yadii Soomaaliya. Wuxuu tababarey oo taageeray dhalinyarada qurbaha ku nool.
Laakiin xiritaanka awgiis, aaska waxaa ka qeybgali kara 11 qof oo ay ku jiraan 7 ka mid ah siddeedii carruur ah.
Markii Khadija Maxamed Cali oo 60-jir ah ay yeelatay astaamo, waxay iska caabiyeen inay ugu yeeraan isbitaalka bilowgii “maxaa yeelay waxay ka walwalsan tahay inay keligeed ku dhinto isbitaalka iyada oo aan qoyskeedu dhinacna lahayn,” ayay tidhi walaasheed, Miksi Mohamed Ali.
Waxay lahayd xaalad wadne xanuun todobo maalmood gudahoodna xaaladdeedii way ka sii dartay.
Waqtiga ay qoyskeeda ugu yeeraan ambalaaska, goor dambe ayey ahayd. Waxay ku dhimatay guriga iyadoo ay joogaan eheladeeda.
In kasta oo sababaha ay u muuqatay in bulshada Soomaalida ay si xun u saameysay ay yihiin kuwo isku adag, haddana dhaqan iyo dhaqan-dhaqaale ayaa ah sababaha, sida ay sheegeen ururada bulshada maxalliga ah.
“Qaabka qoysaska Soomaaliyeed ee qoysaska badankood waxay leeyihiin jiilal badan oo ku nool hal saqaf,” ayay tiri Dr Samira Hassan, oo ah aasaasaha Ururka Caafimaadka Soomaaliyeed ee Ingiriiska (BSMA).
“Inbadan waxay ku noolyihiin bulshooyinka faqiirka ah iyagoo ku mashquulay sidii wax aan macquul aheyn oo guriga dhexdiisa ah.”
BSMA waxay bulshada siineysay macluumaad muhiim ah “si ay ula tacaasho macluumaadka khaldan iyo cabsida” ee ay keentay COVID-19.
Ilaa iyo hada, ma jiraan tirakoobyo lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan asalka qowmiyadeed ee dhibbanayaasha coronavirus. Laakiin waxaa jira cadaymo sii kordhaya oo sheegaya in coronavirus-ka si aan caadi ahayn u saameeyo dadka ka soo jeeda qowmiyadaha tirada yar.
Kadib markii wicitaano uu hogaaminayo Gudoomiyaha Ururka Caafimaadka Ingiriiska Chaand Nagpaul, dowlada waxay bilawday dib u eegis rasmi ah sababaha ay taasi u dhici karto. Xisbiga shaqaalaha mucaaradka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay baaritaan.
Marka loo eego tirakoobka sanadkii 2011, waxaa jiray ku dhawaad ​​108,000 oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Boqortooyada Ingiriiska.
Toddobaadkii hore, 27 urur oo Soomaali ah oo ku sugan London ayaa soo saaray bayaan ay si wadajir ah ugu muujinayaan caqabadaha bulshada Soomaaliyeed ay kala kulmeen ka dib markii cudurka coronavirus, waxayna ugu baaqeen maamulka inay wax ka qabtaan.
“Waxaan u wada nimid mid mid ahaan sidii aan ula soo bixi lahayn qorshe ficil deg deg ah,” ayuu yiri Cabdi Musse, oo ah agaasimaha Saaxiibada Horn Foundation.
“Waxaan sidoo kale ka shaqeynaynaa aruurinta tirakoobkayaga gaarka ah ee tirada dhimashada COVID-19 ee ka dhex dhaca bulshada Soomaaliyeed,” ayuu yiri Musse.
Previous articleThe researchers looking for the reason for the absence of the Korean dictator “Kim Jong-un” for 3 weeks
Next articleAXKAAMTA SOONKA – DERSIGA 2AAD